Xayeysiinta bulshada ee hal abuurka leh si loo badbaadiyo meeraha | Abuurista khadka tooska ah
Xayeysiinta bulshada ee hal abuurka leh si loo badbaadiyo meeraha
Pablo Gonder | | Design Graphic, Dhiirrigelinta
La xayeysiinta hal abuurka bulshada si loo badbaadiyo meeraha waa aalad weyn oo macnaheedu yahay gaadho dad badan oo isticmaalaya xayeysiinta Isbahaysi ahaan, shaki la'aan, xayeysiintu waxay maamushaa inay u rogto farriimaha bulshada wax soo jiidasho iyo soo jiidasho leh, kana dhiga iyaga ujeedooyinka deegaanka ku kasbato farshaxanka.
Raadi sida aad u awoodid midee farshaxanka / nashqadeynta / xayeysiinta leh arrimo bulsheed kuwaas oo doonaya inay dhinac iska dhigaan fikirka iibinta sheyga laakiin na tus xaqiiqada bulshada iyada oo loo marayo hal-abuurnimo. Ololeyaal cagaaran oo nooc kasta leh si kor loogu qaado wacyiga dhibaatooyinka hadda jira ee la xiriira gurigeenna, meeraha Dunida.
Xayeysiinta ayaa had iyo jeer loo isticmaali jiray in ay naga iibiso wax soo saar cusub iyada oo loo marayo habab kala duwan iyo macnaheedu yahay in lagu gaaro adeegsadaha, hal-abuurnimo iyo farshaxan oo ay weheliso xayaysiis waxay bixiyeen qalabkan xal aad u hal abuur leh iyada oo soo jiidasho weyn u leh isticmaalaha iyada oo ay ugu wacan tahay awooddeeda muuqaal ee muuqata.
Laga bilaabo iibinta sheyga iyo iibinta fikradda
Waxaan iska dhignay fikirka iibinta sheyga waxaanan diiradda saareynaa fikradda iibinta / gudbinta fikradaha taxane ah, kiiskan fikradaha deegaanka iyo bulshada inay u adeegsan doonaan xayeysiinta si la mid ah shirkadaha ay sameeyaan laakiin ka fekeraya inay la xiriiraan adeegsadaha si aysan u iibinin nooca baabuur ee ugu dambeeyay ee astaantaas laakiin loo iibiyo ku bari karo dhaqan gaar ah. Waxaa jira ololeyaal badan oo lagu fuliyo ujeedooyinka bulsheed oo nooc kasta leh, laga bilaabo la dagaallama kansarka ilaa kaymaha laga badbaadinayo jarista aan kala sooca lahayn.
Soo jeedinta aan ku aragno salka waxaan isku aragnaa kahor sawir hal abuur sare leh oo leh a natiijo garaaf oo aan cillad lahayn. Si aad si fiican u fahamto garaafka waa inaad na weydiisaa waa maxay dhibaatada aad rabto inaad gudbisoXaaladdan oo kale, dulucdu waa jarista dhirta. waan ogahay wuxuu la xiriiraa nolosha aadanaha (sambabaha) kaymaha Muujinaya sida geedaha loo jaray sidaas darteedna ay u burburinayso sambabkayada.
Mid ka mid ah ururada sida weyn uga dhex muuqda adeegsiga xayeysiinta sheegasho si loo gaaro dad badan ayaa ah WWF. Ayadoo loo marayo soo jeedin garaafyo hal abuur leh waxay muujinayaan dhammaan noocyada kala duwan dhibaatooyinka dhabta ah hab sidan ah wuxuu doonayaa inuu abuuro naxariis iyo inuu wacyi geliyo adeegsadaha ka hor dhibaatooyinka noocan ah.
Jaantuska hoose waxaan ku aragnaa sida WWF u qaabeyso xayeysiinta ku habboon waqtiyada Mostrando awoodda warbaahinta bulshada iyo awoodeeda si ay taageero uga hesho sababaha noocan ah. Fariin isku mid ah ayaa loo tarjumay hal abuur iyo, kiiskan, qaab shucuur leh.
Mid kale oo ka mid ah wakiilo waaweyn sida difaacayaasha meeraha waa ururka Greempeace, iyaguna sidoo kale waxay adeegsadaan naqshad iyo xayeysiin iyada oo loo adeegsanayo sidii loo gaari lahaa isticmaaleyaal badan.
Waxaan arki karnaa a Ololaha xayaysiinta wicitaan aad u xiiso badan "Filayaasha Cimilada" waxa ololahani sameynayo ayaa tusinaya isticmaalaha dhibaatada maamul xumo wajiga dhibaatooyinka deegaanka laba shaqsi oo go'aan leh. Waan arki karnaa sawirada oo waxaan xukumi karnaa inay sax yihiin iyo in kale.
Ololuhu wuxuu weydiisanayaa dadka isticmaala inay u codeeyaan yaa ugu xun xun cimilada. Haddii aad rabto inaad u codeyso xumaanta aad jeceshahay, waa inaad gashaa web
Waxay muujiyeen laba dabeecadood oo dhab ah iyo laba kale oo aan run ahayn iyada oo qayb ka ah ololaha.
Xaaladdan oo kale afka ayaa loo isticmaali jiray gaadhsii fariinta bulshada waa sawirka, waxay na tusayaan sawirro aad u layaab leh oo ay la socdaan fikrad aad u cusub oo soo jiidasho leh, shaki la'aan waa mashruuc hal abuur weyn oo leh aasaas bulsheed aad u adag.
Xayeysiintu waxay noqon kartaa saaxiibkayaga weyn marka sababta ay isku daydo inay isku daydo gaadho adduun kafiican dhammaan. Xayeysiinta, farshaxanka iyo naqshadeynta oo gacanta lagu hayo hesho si aad u bedesho adduunka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Xayeysiinta bulshada ee hal abuurka leh si loo badbaadiyo meeraha
Kani waa CDay, maalin loo maleeyo naqshadeeyayaasha
Sida miisaan loogu dhimo Photoshop iyo waxyaabo kale oo xiiso leh